July Dream: Am I wrong?
စေတနာကောင်းရင် ကံကောင်းမယ်နဲ့ စေတနာသည် လူတိုင်းနဲ့ မတန်ဆိုတဲ့ မြန်မာဆိုရိုးနှစ်ခုကြား ဘယ်ဘက်ခြမ်းက ကိုယ်နေရတော့မလဲလို့ စဉ်းစားမိတာ အကြိမ်ကြိမ်။ လောကရဲ့ သဘောကိုက ထွေပြားတတ် လွန်းတာလား။ ကိုယ့်ကပဲ ညံ့ဖျင်းလွန်းသေးတာလားကို မဆိုနိုင်ဘူး။ လောကဓံရဲ့ လက်သီးချက်က တစ်ချီတစ်ချီဆို နင့်ကနဲ၊ ကိုယ်တော့ မိုက်ကနဲ ဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်။ ကိုယ်မှားနေလား။
ဈေးကွက်စီးပွါးရေးမှာ နိုင်ငံတော်က အလုံးစုံ တာဝန်ယူထားပေးခဲ့ရတဲ့ ပြည်သူ့ဆေးရုံများ သာမကတော့ဘဲ ပုဂ္ဂလိက ဆေးရုံဆေးခန်းကြီးများ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီမှာ ထိုက်သင့်တဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ ထိုက်သင့်တဲ့ ၀န်ဆောင်မှုတို့ကို ရရှိနိုင်ပြီး တချို့လည်း ဈေးမြင့်မြင့်နဲ့ ၀န်ဆောင်မှု ကောင်းကောင်းရယူနိုင်ကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် နိုင်ငံတော်ပိုင်ဆေးရုံများမှာ နိုင်ငံဝန်ထမ်းဆရာဝန်၊ ဆရာမနဲ့ ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းတွေဟာ နိုင်ငံတော်ရဲ့ လစာကို ခံယူစားသုံးပြီး မကျန်းမာသူတို့ကို စောင့်ရှောက်ကူညီပေးလျက်ပဲ ရှိပါတယ်။
နိုင်ငံတော်မှ ပံ့ပိုးဖြည့်ဆည်းပေးထားတဲ့ အခြေခံ အဆောက်အဦးများ ရှိပါတယ်။ ကျွမ်းကျင်ဆရာဝန်၊ ဆရာမများ ၀န်ထမ်းများ ရှိပါတယ်။ ပစ္စည်းကိရိယာများ အတတ်နိုင်ဆုံး ပြည့်စုံလုံလောက်မှု ရှိစေရန်ကိုလည်း နိုင်ငံတော်မှ တာဝန်ယူ ဖြည့်ဆည်းပေးလျက် ရှိပါတယ်။
ဆိုရှယ်လစ် စီးပွါးရေးစနစ် မဟုတ်တော့တာကြောင့် ပြည်သူအားလုံးအတွက် ဆေးဝါးကိုတော့ နိုင်ငံတော်မှ လုံးဝ ပြည့်စုံ လုံလောက်မှု ရှိစေရန် ပံ့ပိုးမှုမပေးနိုင်တော့ပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း မရှိမဖြစ် အဓိကဆေးဝါး၊ အခြေခံဆေးဝါး၊ တီဘီရောဂါ ကုဆေးဝါး၊ မြွှေဆိပ်ဖြေဆေး၊ ကလေးများ ရောဂါကာကွယ်ဆေး၊ ငှက်ဖျားဆေး၊ သားဆက်ခြား စီမံကိန်းအတွက် ဆေးဝါးတွေကိုတော့ အတတ်နိုင်ဆုံး ဖြည့်ဆည်းပေးနေပါတယ်။
ဒီကြားထဲမှာပဲ တိုးတက်ပြောင်းလဲလာတဲ့ ခေတ်စနစ်တွေကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံဟာ နောက်ကျမကျန်ရစ်ဘဲ ကမ္ဘာမှာ ဒီနေ့ပေါ်ပြီး ဒီနေ့သုံးနေတဲ့ ဆေးကို ကိုယ်နိုင်ငံမှာလည်း ချက်ချင်းလိုက်ပြီး သုံးနိုင်တဲ့ ခေတ်ကို ရောက်ရှိလာပါတယ်။ ဈေးကွက်ဖွင့်လှစ်မှုနဲ့အတူ ဆေးကုမ္ပဏီများရဲ့ တင်သွင်းမှုနဲ့ ဆေးဝါးအသစ်များကို လက်ခံသုံးစွဲခွင့် ရရှိလာခဲ့ကြပါတယ်။
လူနာတစ်ယောက် နိုင်ငံတော်ပိုင် ဆေးရုံကို ရောက်ရှိလာတဲ့အခါ အစိုးရ ထောက်ပံ့ဆေးဝါး မဟုတ်တဲ့ အခြားခေတ်မှီ ဆေးဝါးများ၊ ကုထုံးများ သုံးစွဲရန် လိုအပ်လာတဲ့အခါ လူနာကို မိမိရဲ့ စရိတ်နဲ့သာ ၀ယ်ယူ သုံးစွဲစေရပါတယ်။
ပြင်ပပုဂ္ဂလိက ဆေးကုခန်းများနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် ၀န်ဆောင်မှုဟူ၍ လုံးဝမကုန်၊ နေထိုင်စရိတ် ပေးရခြင်းလည်း မရှိဘဲနဲ့ ဆေးဖိုးအတွက်သာ ကုန်ကျခံရခြင်းများ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးရုံမှ ပေးနိုင်တဲ့ ဆေးဝါးများကို ပေးပြီး လိုအပ်လာခဲ့ရင်တော့ ပြင်ပမှဆေးဝါးများ ၀ယ်ယူသုံးစွဲ ကျခံရပါတယ်။
ငွေကြေးပြည့်စုံ ချမ်းသာသူတို့က ပြင်ပပုဂ္ဂလိက ဆေးရုံဆေးခန်းများကိုသွားပြီး နွမ်းပါးချို့တဲ့သူတို့က နိုင်ငံပိုင်ဆေးရုံများကိုသာ အားကိုးကြရပါတယ်။ ဒီအခါ ၀ယ်ယူသုံးစွဲရတဲ့ ငွေကြေးဟာ အနည်းငယ်ပင် ဖြစ်ပါစေ သူတို့အတွက်ကြတော့ ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုးတစ်ခု ဖြစ်လာပါတယ်။
ဒီအတွက်ကိုလည်း နိုင်ငံတော်မှ နိုင်ငံပိုင်ဆေးရုံများအတွက် ဆေးပဒေသာပင် ရန်ပုံငွေများ စုဆောင်းစိုက်ထူ ထားရှိစေ ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီရန်ပုံငွေဟာ ဘဏ်မှာထားရပြီး အရင်းငွေကို လုံးဝထုတ်ယူ သုံးစွဲခွင့်မရှိပါဘူး။ ရရှိလာတဲ့ အတိုးအပွါးများကိုသာ ဆေးရုံကြီးကြပ်ကော်မတီရဲ့ အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာ စနစ်တကျ သုံးစွဲရပါတယ်။ နွမ်းပါးတဲ့လူနာ ဦးရေဟာ ရရှိလာတဲ့ အတိုးထက် ကျော်လွန်သွားခဲ့ရင် စိုက်ထုတ်ငွေကြေး သုံးစွဲမှုဟာလည်း ကန့်သတ်ချက် ရှိလာခဲ့ပါတယ်။
ဆရာဝန်တစ်ဦးဟာ လူနာတစ်ယောက်အတွက် မိမိကိုယ်ပိုင် ငွေကြေးများထဲမှ တစ်ထောင်ကျပ် လှူဒါန်းသုံးစွဲပေးခဲ့ရင် အယောက်တစ်ရာဆိုရင် ငွေတစ်သိန်း ကုန်ကျတာမို့ မိမိရရှိတဲ့ လစာငွေထက် ကျော်လွန်သွားခဲ့ရင်လည်း ထိုဆရာဝန်ဟာ မတတ်နိုင်တော့ပါ။ ယနေ့ခေတ် ဆေးဝါးစရိတ်များအရ ငွေတစ်ထောင်ကျပ်ကလည်း အရာမထင်တော့ပါ။
ပြသနာကို ဖြေရှင်းရန် စေတနာအမှန်ဖြင့် လုပ်ဆောင်ချက် အမှန်တစ်ခုကို ပြုခဲ့မိသည်ဟု ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ထင်မိသော်လည်း မိမိအတွက်တော့ ပြသနာတစ်ခုကို ရှာဖွေမိလိုက်သလိုသာ ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ရှိနေတဲ့သူများဆီမှ မပြောပလောက်တဲ့ ပမာဏ နည်းနည်းကလေးနဲ့ လူဦးရေများများ စုကြည့်ရအောင်။ ဘဏ်မှာ ပုံသေအပ်တဲ့စနစ် မဟုတ်ဘဲ လစဉ်လစဉ် ၀င်ငွေ ရရှိနေအောင် ကြံဆောင်ကြည့်ကြရအောင်လို့ ကိုယ်နေတဲ့ မြို့မိမြို့ဖများ၊ သြဇာအာဏာ ကြီးမားသူများကို ရှင်းပြအကူအညီတောင်း၊ စည်းရုံး ဆောင်ရွက် ကြည့်ခဲ့မိပါတယ်။
လူတစ်ယောက်ကို တစ်လ ၅၀၀ ကျပ်နဲ့ စုခဲ့လို့ လူတစ်ရာကိုသာ စည်းရုံးနိုင်ခဲ့ရင် ဘယ်လောက်၊ လူ ၅၀၀ ကိုသာ စည်းရုံးနိုင်ခဲ့ရင် ဘယ်လောက်၊ စိုက်ထုတ်သုံးစွဲ ကူညီပေးနိုင်မှာပဲလို့ တစ်ယောက်အားနဲ့ ယူလို့မရတဲ့အရာကို အများအားနဲ့ မျှော်ကိုးရင်ခုန်ကြည့်ခဲ့မိပါတယ်။
ကိုယ်နဲ့ ကိုယ့်ဆေးရုံအပေါ်မှာ ယုံမှားသံသယတွေ ရှင်းအောင်လို့ အဲဒီအဖွဲ့အစည်းထဲမှာ ကိုယ်ဘယ်နေရာ ကမှ မပါပါရစေနဲ့။ ဘာတာဝန်ကိုမှ မယူရပါစေနဲ့။ ချိူ့တဲ့နွမ်းပါးတဲ့ လူနာရောက်ရှိ လာခဲ့လို့ရှိရင် အသင်းကို အကြောင်းကြားပါမယ့်။ တာဝန်ရှိသူက လာကြည့်ပြီး ဆေးရုံက လိုအပ်တဲ့ဆေးဝါးကို လူနာကို ကိုယ်တိုင်ဝယ်ယူ ပေးသွားပါ။ အခြားဝန်ဆောင်မှု တစ်စုံတစ်ရာအတွက် အသင်းပိုင်ငွေကြေး တစ်ပြားတစ်ချပ်မှ မကုန်ကျရအောင် ကိုယ့်တာဝန်ထားပါလို့လည်း အာမတွေခံလို့ ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ အပိုင်းပဲ ကိုယ်တာဝန်ယူပြီး စိတ်ကူးတွေ စိန်စီထားတဲ့အချိန်တွေပေါ့။
အတိုင်ခံရလို့တဲ့၊ စစ်ဆေးခံရမယ်တဲ့။ ပီအီးတဲ့။ ဒီအီးတဲ့။ အဲဒီအိမ်မက်မျိုးတွေက တစ်ခါမှတောင် စိတ်မကူးခဲ့ပါပဲနဲ့ ကိုယ့်ဘ၀ထဲ အတင်း တိုးဝင်လာခဲ့တယ်။ ဘယ်နေရာမှာများ မှားသွားခဲ့တာလဲ။ ဘယ်လိုချိန်မှာ အမှားပါသွားခဲ့တာလဲနဲ့ ဦးနှောက်ကို ချာချာလည်ရောပဲ။ ငွေလည်း တစ်ပြားမှ မကိုင်၊ တာဝန်ရှိသူလည်း မလုပ် အစစကင်းအောင် နေခဲ့ပါရဲ့ နဲ့တောင် သြော်... ငါ့နှယ် ဖြစ်ရလေခြင်းရယ်လို့ပဲ ညည်းလိုက်ချင်တော့တယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ပဲ စိန်စီထားတဲ့ အိမ်မက် တွေလည်း ကျောက်ခဲစီထားခဲ့သလိုပါပဲ။ ပလုံလေးတောင် မြည်သံမကြားဘဲ စုန်းစုန်းကို မြုပ်ခဲ့တော့တာပါ။
ကိုယ်ရလိုက်တာက ကြောက်သွားခြင်း၊ လန့်သွားခြင်းနဲ့ နောင်ကြဉ်သွားတယ်လို့များ ပြောလို့ရမလားပဲ။ နေတော့ကွာ။ ဒင်းတို့ထိုက်နဲ့ ဒင်းတို့ကံပဲ၊ သတ္တ၀ါ တစ်ခု ကံတစ်ခုပေါ့လေ။ သေချာတာကတော့ သိပ်ကိုသတ္တိရှိပြီး သိပ်ဇွဲကောင်းတဲ့ စိတ်ဓါတ်ပိုင်ရှင်မျိုးထဲ ကိုယ်မပါတာပဲနေမှာ။ နောက်မြို့တွေမှာကော ... အင်းလေ..... မလုပ်မရှုပ် မပြုတ်ဘဲ နေလိုက်တော့လည်း အေးတာပါပဲ.... ဆိုပြီး တွေးမိသွားတယ်။ ကိုယ်မှားနေပြီလား။
လုပ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ ရာထူးဌာန္တရကို အသုံးပြုပြီး စပါးတင်းထောင်ပေါင်း၊ မြေကွက်လယ်ကွက်နဲ့ မြေတွေ ပိုင်ဆိုင်နိုင်အောင် လုပ်နိုင်ခဲ့ကြတဲ့ လူတွေက ဘာပြဿနာမှ မတက်ဘဲ ကိုယ့်မှ ဘာကြောင့် ဖြစ်ရတာလဲ၊ သြော်... လောကမှာ ကိုယ်မသိတာတွေ ရှိနေပါသေးလား။ ကိုယ်မှားနေလား။
ကလောင်ရှင် - ရွှေမိုးညို
7 Days New Journal
ဇန်န၀ါရီ ၁၈ ၂၀၀၇
ဒီအီး = Departmental Enquiry
ပီအီး = Personal Enquiry
Keep up with great work. We need more people like you. Hkyet dar ka lu twe "moe hka yae`" drink ne kya dar bar byarr..